By WARIYAHA GAROWE ONLINE , Galkacyo
GALKACYO, Puntland- Iska hor imaad khasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta ka dhacay nawaaxiga Garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Galkacyo, kadib dagaal dhexmaray ciidamo katirsan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug.
Sida Garowe Online u sheegeen dad goob joogayaal ah iskudhaca ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamo katirsan Galmudug ay weerar ku qaadeen Gaari Iskarogo ah oo nawaaxiga Garoonka Diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ku sugnayd kaasi oo ay wateen dad shacab ah.
Inta la xaqiijiyay hal Askari oo katirsan ciidamada Puntland ee Garoonka ku sugnaa ayaa ku dhintay mid kalena waxaa soo gaaray dhaawac, halka Galmudug dhankooda dhimashada la sheegay inay gaarayso labo qof.
Ciidamo katirsan kuwa isku dhafka ah ee gobolka Mudug ayaa kala dhexgalay labada ciidan oo muddo is-rasaasayn xooggan dhexmaraysay.
Majirto cid katirsan labada dhinac oo ka hadashay dhacdadaas oo kusoo aaday xilli muddooyinkii dambe Galkacyo ay ka dhacayeen dilal qorshaysan oo lala eeganayay mas’uuliyiin katirsan dhinaca Puntland.
Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa dagan inkastoo laga dareemayo xiisadda dagaalkii barqankii ka dhacay nawaaxiga Garoonka Cabdullaahi Yuusuf.
Dagaal u dhaxeeyay mallayshiyaad hubaysan oo kala taabacsan Puntland iyo Galmudug ayaa maanta ka dhacay deegaano ...
Sarkaal katirsan Ciidanka Puntland oo lagu dilay Gaalkacyo
Puntland 26.12.2017. 23:33
Tirada dhimashada Dagaalka gobolka Mudug oo korartay
Puntland 10.12.2019. 01:20
Saahid Maxamuud oo loo doortay Duqa cusub ee Gaalkacyo
Puntland 26.03.2019. 17:01
Fahfaahin ku saabsan Qarax Gaari oo ka dhacay Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 23.01.2019. 16:51